Google AdWords ho an'ny masoivoho | Ny fitaovana rehetra ilainao!
Google AdWords ho an'ny masoivoho: voafehy ny fampielezan-kevitry ny mpanjifanao rehetra
Miaraka amin'ireo Google Ads for Agencies ireo dia handany fotoana ianao hahafahanao mifantoka amin'izay zava-dehibe indrindra: ny mpanjifanao.
Ny endri-javatra tsara indrindra ho an'ny ekipa-mifantoka fampiharana
Mahazoa fampahafantarana sy ny tatitra ara-potoana amin'ny mpanjifa 'fanentanana fampisehoana.
Ampandrenesina ny momba ny zava-dehibe indrindra amin'ny Google AdWords for Agencies
Amboary ary ataovy manokana ny notifications hahafantaranao rehefa midina ny fiovam-po na rehefa mila manangona ny volan'ny fampielezan-kevitra ianao.
Ampio amin'ny Slack Add ny Teams Ampio amin'ny Google Chat
Automatic Smart Reports isam-bolana
monthly reports lalina izay mampiseho tsara ny metika sy ny fitomboan'ny fampielezan-kevitr'ireo mpanjifanao.
Ny angona rehetra amin'ny tsindry iray amin'ny Google Sheets
Aza mandany segondra amin'ny fanangonana tanana ny metatra ho an'ny mpanjifanao. Ampiasao mora foana izy add them to a Google Sheet.
Download Google Sheet add-eo
Hanatsarana ny mpanjifa 'fanentanana fampisehoana
Atambatra ao amin'ny Google Sheets angona rehetra momba ny fampielezan- kevitra, ampifanaraho amin'ny fanairana fampisehoana araka izay ilaina izany ary mahazoa tatitra Smart Smart isam-bolana izay azo alefa amin'ny mpanjifanao.
Download Google Sheet add-eo Ampio amin'ny Slack Add ny Teams Ampio amin'ny Google Chat
Misimisy kokoa momba ny Google AdWords for Agencies Tools
Mianara bebe kokoa momba ny fitaovanay namboarina ho an'ny Google AdWords ho an'ireo masoivoho sy izay rehetra azonay omena anao sy ny orinasanao.
Inona no manolotra ho anao sy ny dokam-barotra fahafahana misafidy
Endri-javatra, soa sy ny tombontsoa
Ny fitaovanay dia natao hanatsarana ny Google AdWords ho an'ireo masoivoho ary noforonin'ny Clever Ads hanamora ny fiainanao sy hanome anao fifehezana feno, amin'ny fotoana rehetra ary na aiza na aiza no tadiavinao, ny fampielezan-kevitrao sy ny an'ny mpanjifanao .
Te hanana ny fanentanana rehetra ataonao ve ianao, havaozina ary mivantana ao amin'ny Google chat anao? Izany rehetra izany sy ny maro hafa dia izay azonay omena anao, natao hilazana aminao ny zavatra ilainao hanatsarana ny fampielezan-kevitr'ireo mpanjifanao hahazoana valiny tsara indrindra.
Manome toky izahay fa manana ny AdWords tsara indrindra ho an'ny fampidirana maso ivoho, hahalala bebe kokoa!
Mamonjy ny fotoana, vola sy ny fitaovana!
Ny fitaovantsika ho an'ny Google Ads dia natao hametrahana vola, loharano ary zava-dehibe indrindra .... Fotoana!
Miaraka amin'ny Slack , Microsoft Teams integrations, Google Chat bot , Google Spre ads mihaino Add-on, ary ny Google Ads , azonao atao ny mandany ny fotoananao sarobidy amin'ny tena zava-dehibe: ny mpanjifanao, ary mbola manana fotoana sisa tavela hankafizanao ny kafe maraina tianao!
Tadiavo ny fotoana mety indrindra amin'ny asa aman-draharaha, manaova fampielezan-kevitra tsara indrindra, mahazoa fampandrenesana ny zava-dehibe indrindra hialana amin'ny fanelingelenana tsy ilaina, hahazoana tatitra isam-bolana, sns. Raha fintinina, fitaovana AdWords ho an'ny AdWords ho an'ny Agencies izay hamonjy fotoana anao hifantohana amin'izay tena zava-dehibe.
Inona no azonao atao amin 'ny fitaovana
-Tsipiriany tatitra isam-bolana amin'ny endrika PDF fa tsara mampiseho ny mari-pandrefesana sy ny fitomboan'ny ny mpanjifa 'fampielezan-kevitra. Mifantoha amin'ny angona fa Ilainao ny Mahalala Izay, ka refeso afa-tsy izay zava-dehibe mba afaka mamonjy ny fotoana ao amin'ny fanadihadiana tsy very antsipirihany ny zavatra tena zava-dehibe ary ho nampahafantarina, angona-noroahina fanapahan-kevitra.
Fantsona fanovana, teny lakile ... Izay rehetra tianao ho fantatra amin'ny tatitra namboarina. Ny fampahalalana rehetra ilainao sy ny fampiasana azy. Manatsara ny fampielezan-kevitrao sy ny fampielezan-kevitr'ireo mpanjifanao mifototra amin'ny fampisehoana, amin'ny alàlan'ny torohevitra sy toro-hevitra vonona ho ampiasaina ho an'ny Google Adwords ho an'ny masoivoho.
Ny endri-javatra tsara indrindra ho an'ny ekipa mifototra amin'ny fampiharana
Mahazoa fampandrenesana amin'ny fotoana tena izy sy tatitra momba ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitr'ireo mpanjifanao. Rehefa miresaka momba ny AdWords ho an'ny masoivoho isika dia tsy maintsy mihevitra izay fitaovana ampiasaintsika ary te hanararaotra handraisana fampandrenesana sy tatitra momba ny fampielezan-kevitra. Inona no ampiasainao amin'ny fahafahanao misafidy? Amin'ny alàlan'ny fitaovantsika no ahafahanao mampiditra ny Google Ads amin'iray amin'ireo telo amin'ireo ekipa mpiresaka malaza indrindra eran-tany: Slack , Microsoft Teams na Google Chat . Misafidiana sy manatsara ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitr'ireo mpanjifanao miaraka amin'ny angona!
Get ihany no nampahafantarina momba ilay zava-manan-danja indrindra
Amboary sy ampanjifao ny fampandrenesanao hahafantaranao izay rehetra mitranga amin'ny fampielezan-kevitrao sy ny an'ny mpanjifanao. Ohatra, raha te hahalala ianao rehefa milatsaka ny fiovam-po na rehefa mila mitombo ny fandaniana amin'ny fampielezan-kevitra dia alao ny iray amin'ireo fampandrenesana anay ary hampahafantarinay anao amin'ny fampiharana fifandraisana izay safidinao! ( Slack , Microsoft Teams na Google Chat ).
Izany, dia ho ny olona milaza izay masontsivana tianao ho laharam-pahamehana, izay fanazavana tianao handray, ary izay zava-nitranga dia heverina ho toy ny hafahafa, ary tokony ho voalaza ho anareo, mba ho mahafantatra ireo zava-dehibe fotoana / antontan-kevitra .
Mba tsy hisy tsy ho voamarika ary eo an-tampon'ny fampielezan-kevitr'ireo mpanjifanao hatrany! Google Ads ho an'ny masoivoho dia tsy mora velively.
Aza mandany iray hafa fanangonana tanana metrika sy angona fanentanana avy amin'ny mpanjifanao. Ampio mora foana sy haingana ao amin'ny takelaka Google izy rehetra. Google Ads ho an'ireo masoivoho mahomby amin'ny fampiasana ireo fitaovana nomen'ny Google sy ireo fampiharana malaza hafa izay efa ampiasainao ao amin'ny masoivohonao.
Google Sheets dia iray amin'ireo fitaovana be mpampiasa indrindra manerantany amin'ny orinasa rehetra amin'ny fikarakarana antontan-taratasy sy ekipa? Raha mampiasa azy ianao dia azonao atao ny manatsara ny fizotranao ary manatsara ny angon-drakitrao ao anaty Drive. Tsy mora izany!
Inona no maha samy hafa?
Fa maninona no mampiasa Google AdWords ho an'ny masoivoho?
Ao amin'ny Clever Ads izahay dia mirehareha amin'ny maha-ampahany amin'ny programa Premier Google Partners, izay anomezanay antoka fa azo antoka 100% ny fizotrany ary mampanantena izahay fa hanaja ny angon-drakitra manokana sy ny mpanjifanay koa izahay. Orinasa sy orinasa maherin'ny 150.000 no niara-niasa taminay ary natoky anay hanatsara ny Google Ads , misy valiny tena tsara. Tsy hanenenanao izany, ny fomba tsara indrindra sy mora (maimaim-poana) hanatsarana ny Google Ads ho an'ireo masoivoho.
Miaraka amin'ny fitaovana sy ny fahaizantsika dia nahavita nanova zavatra sarotra sy mandany fotoana ho zavatra tsotra sy haingana izahay. Mety ho hitanao fa mahafinaritra miaraka aminay koa ny AdWords Ho afaka "milalao" amin'ireo tatitra ataonay sy toro-hevitra hahatratrarana ROI faran'izay betsaka (Return on Investment) ianao ary isa betsaka indrindra nefa tsy tsapanao akory, mandritra ny ianaranao!
Mihodina ny fahafahanao misafidy any an-boky sampan-draharaha ao amin'ny Google Ads fampielezan-kevitra, ny hendry indrindra ary za-draharaha indrindra ao amin'io dingana miaraka Clever Ads . Hainay foana izay hatao manaraka, azonao atao ny matoky anay handray ny dingana voalohany na manaraka.
Mino izahay fa ny masoivoho misy habe sy teti-bola araky ny tokony ho izy dia tokony hanana fidirana amin'ny doka amin'ny Google, noho izany dia namorona Google Ads ho an'ny masoivoho ahafahanao mifaninana amin'ny sehatra milalao miaraka amin'ireo masoivoho lehibe kokoa sy za-draharaha izay manana marketing lehibe kokoa teti-bola.
Ny antony mety itiavanao hampiasa ny fitaovanay dia mety miovaova, na miahiahy ianao fa Google Ads an'ny mpanjifanao, raha tianao ny manamarina raha tena nanao ny tsara indrindra ny masoivohonao, na angamba ianao fotsiny liana hahafantatra raha misy vokany ve ny asa mafy ataon'izy ireo? Clever Ads AdWords ho an'ny sampan-draharaha dia ny tariny dia ny fitaovana.
Ho fanampin'izay, ny ekipanay manam-pahaizana dia vonona hanampy anao hatrany, ary afaka mifandray amin'izy ireo foana ianao raha misy fanontaniana, olana, torohevitra na fanampiana ilainao amin'ny mpanampy @ cleverads .com, faly izahay manampy anao sy ny maso ivoho miaraka aminao na inona na inona ilainao sy ny fahafahanao misafidy.
Integrated Suite ny Tools
Tombony na tombony iray hafa amin'ny fampiasana ireo AdWords ho an'ny Clever Ads fahafahanao miditra amin'ny zava-drehetra avy amin'ny Clever Ads , ary azonao atao ny manambatra ny herin'ny Google Ads miaraka amin'ny fanamorana ny fitantanana omen'ny Clever Ads anao. Ny tatitra rehetra, ny fampandrenesana, ny toro-hevitra rehetra dia hanampy anao hamorona Google Ads ho an'ny mpanjifanao, haharaka hatrany ny algorithma vaovao an'i Google, ny fanitarana fampielezan-kevitra, sns. mba hampifanarahana ny hevitry ny teny lakile, ankoatra ireo fiasa hafa. Ny Google Ads Ads for Agencies fitaovana ampiasainay rehetra dia vonona hanao ny asa mafy rehetra mandritra ny andanianao ny fotoanao manao izay tsara indrindra vitanao: mihazakazaka sy mitantana ny orinasanao ary mampifaly ny mpanjifanao.
Team mifototra amin'ny fampiharana ny fifandraisana
Ampidiro amin'ny Slack , Microsoft Teams , na Google Chat Google Ads
Amboary ny fanairana fanairanao mba handraisana tatitra indray mandeha na isan-kerinandro hanomezana metrika anao amin'ny alàlan'ny chat sy handraisana sary sy metika mifandraika amin'ny fahombiazan'ny kaontin'ny client anao. Google AdWords ho an'ny masoivoho dia mora kokoa amin'ny alàlan'ny fampidirana chat toa izao!
Alao ny fihenam-bidy farany amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny ads Google Ads Audit Clever ary manatsara ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra Google Ads anao.
Mpandika teny amin'ny Google Ads
Aza nametraka fetra ny raharaham-barotra. Na aiza na aiza tianao ambarao! Zavatra maro ny zava-drehetra ho fiteny.
Hanivana ny valiny, ary hahita ny tonga lafatra fahafahana ho an'ny fampielezan-kevitra.
Vokatra Clever Ads bebe kokoa
Ny fitaovana rehetra tokony hahabetsaka ny mpanjifa "fampielezan-kevitra ara-barotra nomerika.